Warar - Isagoo wajahaya baahida weyn ee 800 milyan oo qof oo ku nool Yurub!
Iyadoo wajaheysa baahida weyn ee 800 milyan oo qof oo ku nool Yurub!
Tijaabada antigen ee shirkada Shiinaha ee COVID-19 ayaa ku guuleysatay "Grand Slam" 15 dal oo ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Boortaqiiska hal talaabo!
Waqtigan xaadirka ah, faafitaanka fayraska mutant iyo arrimo kale, cudurka faafa ee 'COIVD-19' ee dalal badan oo Yurub ah ayaa dib u soo noolaaday. Xogta cudurka faafa ee uu soo saaray xafiiska yurub ee WHO maalmo ka hor waxay muujineysaa in cudurka faafa ee yurub uu muujiyey astaamo muuqda oo ka sii daraya seddex isbuuc oo isku xigta.
Saamaynta cudurkan faafa, Yurub, oo dadkeedu ku dhow yahay 800 milyan, waxay soo bandhigeen dalab aad u weyn oo loogu talagalay alaabada baaritaanka antigen ee COVID-19. Sababtoo ah ogaanshaha antigen waxay leedahay xadka farsamo gaar ah, alaabada iyo soo saarayaashu waxay isku darsameen wanaag iyo xumaan. Iyada oo laga jawaabayo heerka ugu hooseeya ee CE iyo sahlanaanta cadeynta, wasaaradaha caafimaadka ee Yurub ayaa aasaasay nidaam caafimaad oo heer qaran ah "whitelist" iyada oo ku saleysan aasaaskan, oo kaliya soosaarayaasha iyo alaabada ku jira "whitelist" ayaa loo ogolaan karaa inay wax iibiyaan dalka gudihiisa.
Iyada oo laga jawaabayo shuruuddan, soo saarayaasha Shiinaha ayaa si firfircoon ugu dadaalaya in lagu daro "whitelist" ee dalalka Yurub. Kuwaas waxaa ka mid ah, New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. (NEWGENE Bioengineering) ayaa soo ifbaxay oo soo galay dhammaan waddammada Yurub ee hadda leh nidaamka "whitelist" waxayna ku guuleysteen taajkii cusub ee yurub ee baaritaanka antigen ee loo yaqaan 'sitelist grand slam! Wadamadaas waxaa ka mid ah Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Switzerland, Boortaqiiska, Czech Republic, Belgium, Hungary, Greece, Moldova, iwm. tijaabooyinka ugu badan ee dahabku ku jiro ee Yurub.
New Gene si guul leh ayuu u gudbay qiimeynta Jarmalka ee PEI
New Gene si guul leh ayuu u gudbay qiimaynta Swiss BAG
Gelitaanka "whitelist" ee dalal kala duwan iyo ka gudubka tijaabada caafimaad ee maxalliga ah ayaa shardi u ah dalbashada is-baaritaanka antigen ee guriga. Iyada oo si buuxda loo xoreynayo codsiyada isreebreebka is-imtixaanka guriga ee waddamada EU, alaabada baaritaanka antigen ee NEWGENE ee COVID-19 waxay ku fadhiisan doontaa boos muhiim ah suuqa Yurub.
Waxaa xusid mudan in marka lagu daro suuqa Yurub, NEWGENE ay sidoo kale sameysay qaabeyn hore suuqyada Koonfurta Ameerika iyo Afrika waxayna heshay ogolaansho deg deg ah (EUA) iyo ruqsadaha soo dejinta ee wadamada sida Peru, Argentina, Ecuador, Kenya iyo Zimbabwe . Kuwaas waxaa ka mid ah, "NEWGENE" ayaa hadda ah sumadda keliya ee Shiinaha laga helo ee COVID-19 ee ogaanshaha antigen-ka ay aqoonsan tahay Wasaaradda Caafimaadka ee Kenya.
Waqtigan xaadirka ah, xaaladda ka-hortagga iyo xakamaynta cudurrada shisheeyaha ah weli way daran tahay. Shirkadaha bayoolojiga ee Shiinaha, in kasta oo ay ka go'an tahay inay adeegsadaan tikniyoolajiyadda si ay u taageeraan la dagaallanka cudurka faafa, waxay sidoo kale fursad u heshay inay dhisto saamaynta dibedda ee noocyada Shiinaha.
NEWGENE waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ay si wada jir ah u maal gashadeen una aasaaseen khubaro ku takhasustay cilmiga biotech ee warshadaha. Waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo iibinta wax soo saarka bayoolojiga. Waxaa ka go'an inay ka dhisto alaabada bayoolojiga ah sida antigens-ka iyo unugyada difaaca jirka, iyo in daawada baaritaanka lagu ogaanayo fitamiinada iyo qalabka la xiriira, iyo baaritaanka sirdoonka macmalka ah. Qaab dhismeedka nidaamsan ee silsiladda warshadaha oo dhan. Shirkaddu waxay ku uruurisay ilo wada shaqeyn qoto dheer nidaamyada caafimaadka iyo caafimaadka ee gudaha iyo dibedda waxayna aasaaseen wadiiqooyin wada shaqeyn muddo dheer ah oo xasiloon dalal badan oo ku yaal Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, iyo Koonfurta Ameerika. Waqtigan xaadirka ah, wax soo saarka tijaabada ee NEWGENE ee COVID-19 ayaa loo dhoofiyay in ka badan 50 dal oo adduunka ah. Waxaan aaminsanahay in noocyo badan oo shiineys ah sida NEW GENE ay door muhiim ah ka ciyaari doonaan caawinta aduunka ee la dagaalanka cudurka faafa!
Jarmal Diiwaangelinta liiska caddaanka ah ee 'BfArM'
Su'aal URL: https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101/100:1422300666539::::&tz=8:00
Faransiis diiwaangelinta liiska
Su'aal URL: https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
Soo hel liiska
Su'aal URL: https://www.finddx.org/test-directory/?_manufacturer=new-gene-hangzhou-bioengineering-co-ltd&_region=asia&_country=china&_self_testingself_collection=no&_assay_target=antigen
Talyaaniga diiwaangelinta liiska
Su'aal URL: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
(ku qor New Gene-ka Denominazione fabbricante)
Switzerland diiwaangelinta liiska
Su'aal URL: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
Boortaqiiska diiwaangelinta liiska
Czech diiwaangelinta liiska
Biljim diiwaangelinta liiska
Griiga diiwaangelinta liiska
Hungary diiwaangelinta liiska
Argentina Shatiga Soo Dejinta
Peru Oggolaanshaha Degdegga ah (EUA)
Kenya Oggolaanshaha Degdegga ah (EUA)
Lambarka 1700, Waqooyiga Tianfu Avenue, Chengdu Aagga Tiknoolajiyadda Sare, Gobolka Sichuan, Shiinaha